Dulqaadka Ma Loo Dhashaa? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Dulqaadka Ma Loo Dhashaa?
Miski Cabdinuur Salal — December 18, 2019
Dulqaadka waxa uu kamid yahay Dabeecadaha ugu wanaagsan ee qofka Aadanaha uu ku dhasho ama uu yeellan karo asagoo u maraayo aqoonta cilmiga, waxa ayna astaan u tahay iimaan xooggan.
Allah qur’aankiisa waxa uu ku yiri “Kaashada Samirka iyo Salaada” Samir ama dulqaadka waxa uu laf dhabar u yahay guusha Adduun iyo mida Aaqiroba Soomaalida waxa ay ku maahmaadaa “ Samraabaa sadkiisa hela”.
Dulqaadka waxa uu leeyahay noocyo kale duwan waxaana kamid ah:
1- In aan u dulqaadanno waajibaadka Alle na saaray sidda: Soonka Saalada Sakada. kawaran haddi aad dhahdo aniga uma dulqaadan karo in aan soomo sababtoo ah maalintii dhan gaajo kuma joogi karo, ama aad tiraahdo subixii Salaada ma tukan karo qabowga biyaha ayaa i dhibaayo in aan ku weyseesto. Waxa aad ka tagtay dulqaadkii aad ugu dulqaadan laheyd wanaaga aad qabirigaada iyo qiyaamadaada aad ku dhisan lahayd. Samirka iyo dulqaadka waa in aad ku camal fasho Qur’aanka iyo Sunnada. Sheeq Ibnu qayim Al jowzi waxa uu yiri “ wxii ku dhaafay kagama gudbeysid murugo, waxaa looga gudbi karaa raali ahaansho.”
2- In aan u dulqaadanno oo nafteenna ka xakameyno xumaanta uu Alle naga xarimay.Sidda in aad dhahdo dhalinyaro ayaan ahay ma guursan karo sinadana kama fogaan karo!! Ama aad tiraahado ganacsiga aan ribo badan la saarin faa’ido badan ma fuusho, ama aad tiraahdo sadaqo iyo sako lagama bixin karo xoolaha waa ay iga yaraanayaan. Waxa aad ka tagtay samirka aad xumaanta naftaada ugu reebi lahayd.
Subanaheenna ( N.N.K.H) waxa uu yiri “ Sadaqada xoolaha ma nusqaamiso ee waa ay siyaadisaa”. Dulqaadka ama samirka waa aas-aaska guul waliba oo Dunidaan taallo. Tusaalle nalka hadda ay dunidaan isticmaasho haddii uu u dulqaadan lahayn ninkii sameyey guul darooyinka badnaa ee uu soo maray maantay nama soo gaari lahayn, mana iftiinsan lahayn dunidaan. Allah subxaanuhu watacala waxa uu yiri “ Kuwa dulqaata ama samro waxa aan siinnaa ajarkooda xisaab la’aan”.
Rasushii uu Alle soo direy waxa ay ahaayen kuwa kaashada samirka iyo dulqaadka dadkana waxa u sheegin jireen in ay kaashadaan samir iyo dulqaadka.
Nabi Ibrahim (C.S) wiilkii uu dhalay isgoo Da’ah oo uu aadka u jeclaa ayaa waxaa lagu imtixaanay in uu gowraco wiilkiisa, waa uu ku samaray imtixaankii Aakhiro oo aan la gaarin ayuuna helay Samirkiisa.
Nabi ayuub (C.S) waxa ku samaray xanuunki waqtiga badan haayey. Sidoo kale Subanaheenna Muxamed (N.N.K.H) waxa uu ku samreen dhibaatooyinka asaga iyo asxaabtiisa ay marsiyeen gaaladii qureyshata aheyd ugu danbeyntii waa ay ku guuleysteen oo maanta waxa dunida saran Baalayiin Muslimiin ah. Qofkii samara waxa uu helaa awood uu kaga gudbi karo xaaladaha adage e nolosha soo mara.
3- Dulqaadka ama samirka waxaa kamid ah dulqaadka qadarka Alle tusaalle: Marka uu ka dhinto waalidkaa, ama uu kaa gubto ganacsi aad lahayd waxa ay kamid tahay wax-yaallah Aadanaha u waashaan.Laakin marka aad tahay ruux dulqaad badan waad ka gudbi doontaa xaaladaas adagg.
Tags: Dulqaadka Ma Loo Dhashaa?Dulqaadka Maloo Dhashaa?
Next post Aanadii Negeeye – Qeybtii 24aad
Previous post Aanadii Negeeye – Qeybtii 23aad